कृषि प्राविधिकलाई अवसरै अवसर, खुल्यो ७० जनाका लागि रोजगारी – Clickmandu
कृषि प्राविधिकलाई अवसरै अवसर, खुल्यो ७० जनाका लागि रोजगारी
क्लिकमान्डु २०७६ साउन २७ गते १०:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । के तपाई कृषि प्राविधिक अध्ययन गरेर बेरोजगार हुनुहुन्छ ? वा तपाईले भर्खर कृषिका विविध विषयको अध्ययन सम्पन्न गरी रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि सुवर्ण अवसर छ ।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ देशव्यापी रुपमा कृषि प्राविधिकलाई नियुक्ती गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । संघीय सरकारले सो अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बेलामा प्रदेश सरकार भने अगं्रपक्तीमा देखिएको छ ।
लोकसेवाले एकैपटक खुलायो १ हजार ९० जना शाखा अधिकृतमा विज्ञापन
एनसीसी बैंकमा १० जनालाई जागिर खुल्यो
पञ्चिकरण विभागले माग्यो ६०० जना कम्प्युटर अपरेटर, तलब दैनिक १२०० रुपैयाँ
सशस्त्र प्रहरी बलले माग्यो २९७ जना इन्सपेक्टर र असई
टुरिजम बोर्डले माग्यो नयाँ सीईओ, यस्तो छ मापदण्ड